Uhlelo lokuhlola lokungena lwe-ZR-1070 Microbial
Uhlelo lwe-ZR-1070 luqukethe uhlelo lokukhiqiza umthombo wegesi, ukutholwa komzimba omkhulu, uhlelo lokuvikela kanye nohlelo lokulawula.Lakhiwa ngochungechunge lwezinto, ezisetshenziselwa ukuhlolwa kokungena kwegciwane elincane lombuso wokusebenza kweshidi, izingubo zokugqoka nezingubo ezihlanzekile .
I-ZR-1311 i-generator aerosol generator iyithuluzi elikhethekile elisebenzisa umlomo wombhobho weCollison ukwenza i-atomize futhi yomise ukugxila okuthile kwesisombululo se-NaCl ukukhiqiza izinhlayiya ze-aerosol ngosayizi othize nokuhlungwa. Ukuze ikwazi ukuzivumelanisa nesimo sezulu sikazwelonke, inomklamo wangaphandle womthombo womoya, idivaysi yokomisa ne-valve elawula umbhobho omningi. Lapho izinga lokugeleza komoya liphakathi kuka-100L / min-120L / min, ukukhishwa kwe-aerosol okukhiphayo kungafinyelela ku- (10 -50) μg / m3.
I-ZR-1304 generator ye-Aerosol
I-ZR-1304 generator ye-aerosol iyithuluzi elikhethekile elingakha ama-aerosol kawoyela ngendlela yokukhiqiza ebandayo. Ububanzi bokuhlushwa kwe-aerosol ngu-0 ~ 200 mg / m³ lapho ukuhamba komoya kungu-0 ~ 120 L / min, futhi ungalungisa ukuhlushwa kwe-aerosol ebangeni elibanzi ngokulungisa ngesandla ukugeleza kokuqaqeka. Ukusebenza kwama-aerosols kuvumelana nezindinganiso zikazwelonke ezihlobene futhi kusebenza ezikhungweni zokuhlola imishini yezokwelapha, izikhungo zokulawulwa nokulondolozwa kwezifo, izinkampani zamakhemisi, ukutholwa kokuvuza kwezihlungi ze-HEPA emakamelweni ahlanzekile.
I-ZR-1220 Mask yokuhlola okufanelekile
I-ZR-1220 mask test tester iyithuluzi elikhethekile lokuhlolwa okufanelekile kwamamaski nokuphefumula, okuhambisana nezidingo zobuchwepheshe ze-OSHA ne-GB 19083-2010 zemaski yezokwelapha. Kusebenza kabanzi ekuhlolweni nasekuhloleni okufanele kwemikhiqizo yokuphefumula ngabakhiqizi bemishini yokuphefumula kanye nezikhungo zokuhlola imishini yokusebenza kazwelonke.
I-ZR-1211 imask yokuvikela imaski isetshenziselwa ukuhlola ukumelana nokuhogela umoya kwamaski esimweni sokuhlolwa esilawulwayo. Iyahambisana namazinga amaningi okugeleza, kufanelekile ukwenza ukuhlolwa okuhlobene nokuhlolwa kwamamaski kwabakhiqizi bemaski, izikhungo zokuhlola zikazwelonke zamadivayisi wokuvikela abasebenzi
I-ZR-1201 Mask umhloli wokumelana
I-ZR-1006 mask particulate filtration ukusebenza kahle kanye nokuhlolwa kokugeleza komoya kuyasebenza ukuhlola ukusebenza kahle kwezinhlayiya nokuma komoya kwamaski nezinto zokuhlunga zezikhungo zokuhlolwa kwedivayisi yezokwelapha, isikhungo sokuhlola ezokuphepha, isikhungo sokuhlola izidakamizwa, izikhungo zokulawulwa nokuvinjelwa kwezifo, isikhungo sokuhlolwa kwendwangu, izibhedlela kanye nabakhiqizi be-R & D.
I-ZR-1002 imaski yokuvikela ukusebenza kwezinhlayiya
Umhloli wokuhlola ukuvikeleka kwezinhlayiya ze-ZR-1002 ukuvivinya umphumela wokuvikelwa kwezinhlayiyana kwamamaski ngokufaka ikhanda elijwayelekile likazwelonke kusuka kwikhabhinethi yokuzihlola yokuzihlanza ye-500L, bese ugqoka imaski ekhanda kusuka, bese ungenisa ubukhulu bobukhulu obuphakathi ( 0.6 ± 0.050) μm, ukugxilwa kungu-20mg / m³ we-NaCl aerosol noma ubukhulu obuphakathi (0.3 ± 0.050) μm, ukugxilwa kungu-20mg / m³ we-oily eros egumbini lokuhlola lokuzihlanza, bese ifomu lekhanda lingisa ukuphefumula ejikaweni le-sinusoidal , usebenzisa ama-photometre akhuphukayo nawasezansi ukuthola ukuhlushwa kwe-aerosol kasawoti kanye ne-oyela aerosol ngaphambi nangemva kwemaski ukuhlola umphumela wezinhlayiya zokuvikela imaski.